Ngabe ungatholaphi uhlu oluphezulu lwe-RP edu backlinks?
Izizinda ze-Edu zibhekwa njengezinamandla kakhulu kuwebhu. Ama-backlink avela kule masayithi anenqwaba yegunya futhi ayigugu emithonjeni yewebhu exhunywe.
Ama-backlink e-Edu yizixhumanisi ezivela emithonjeni ephezulu yezemfundo yezemfundo. I-Google idonsela izixhumanisi ezinjengokuthembela nokugunyaza kakhulu futhi inikeza isikweletu kwisizinda esixhunyiwe. Ngamanye amazwi, izinhlamvu eziningana ze-backlink edu zingaletha inani elihle kwisayithi lakho kunezinkulungwane zezixhumanisi eziphansi noma eziphakathi. Bangakwazi kakhulu ukukhulisa izikhundla zakho futhi bakusize ukuba ufike ku-TOP ekhasini lemiphumela yokusesha.
Njenge-rule edu domains ayitholakali kalula futhi kuphela labo abanesiqiniseko sokusungula imfundo bangakha imithombo yabo yewebhu kumazinda e-edu. Ngaphezu kwalokho, inani elikhulu lezizinda ze-edu liye lahlala isikhathi esithile. Imithombo yeWeb ekhona kuwebhu isikhathi eside inenqwaba yezixhumanisi ezingenayo kanye nekhasi eliphakeme le-PageRank. Yingakho kunengqondo ukudala uhlu lwe-backlinks. Ngokuqondene nami, i-Google yenza isikhangiso kwizizinda ze-edu. Noma kunjalo, udinga ukusebenza kanzima ngaphansi kokuqukethwe kwakho, ukuhlelwa kwewebhusayithi kanye nedumela lomkhiqizo ukuthola ama-backlink edu. Yingakho okuqukethwe kwezemfundo esekelwe ekucwaningweni kwemikhiqizo futhi ukholelwa ukuthi ukugxila ekutholeni amanye ama-backlink ehloniphekile wezinjongo zenjongo yokusesha injini kungakusiza ukuthi uqonde kangcono.
Indlela yokuthola uhlu lwe-backlinks edu
Abanye abaphathi bewebhu bakholelwa ukuthi akunakwenzeka ukuthola ama-backlink e-free mahhala. Izithiyo eziningi azivumeli ama-webmasters akha izixhumanisi ezingenayo kwi-backlink edu. Kunzima ukuza nokuqukethwe, kuyabuhlungu ukulandela zonke izidingo, nezinye izizathu ezingenangqondo ezigcina abanikazi bewebhusayithi besuka emakhakheni wokwakha ama-edu.
Nokho, empeleni, konke kulula kakhulu. Uma wazi ukuthi wenzani, ukuthola ama-backlink e-edu ngeke kube nzima. Noma kunjalo, okokuqala udinga ukuza namaqhinga wokwakha okusebenzayo bese ulandela. Ake sixoxe ngezinye zazo.
Ngenye yezindlela ezilula zokuthola izixhumanisi kunoma yiziphi izizinda, kufaka phakathi izidingo zemfundo. Amawebhusayithi e-Edu aphezulu kumakhasi ezinsiza. Ingaba inzuzo kubanini bewebhu abayazi ukuthi benzani. Ngokuqinisekile udinga ukuba ku-niches ethize ukusebenzisa le nqubo yokwakha isixhumanisi. Ngokwesibonelo, uma ibhizinisi lakho lifakwa embonini yempilo, ungayisebenzisa ngokunenzuzo. Nikeza usesho lwe-Google, usebenzisa imibuzo elandelayo: "isayithi:. edu fitness + inurl: izinsiza, "" isayithi:. izidakamizwa ze-edu slim + inurl: izixhumanisi, "njll. Ngokwenza lolu cwaningo, uzothola uhlu lwemithombo ye-web. Udinga ukuxhumana nalaba abanikazi bewebhu noma abahlonishwayo bese ubatshela ngomthombo wakho wewebhu ohambisana nenani elikhulu lolwazi ngesihloko.
Lesi sakhiwo sokuxhumanisa sihle, kodwa kufanele uqaphele ukuthi kude nabo bonke abantu bazoxhuma kukhasi lakho noma isiqephu sokuqukethwe. Kukhona ingozi ukuthi amaphesenti abalulekile abaphathi bewebhu abambezela isiphakamiso sakho. Noma kunjalo, udinga ukuthatha ngokufanele njengoba le ndlela ilula futhi ayithathi isikhathi esiningi. Yingakho zonke izixhumanisi oziphathayo zokubamba ngale ndlela ziyinqoba kuwe Source .